Video Content အတွက် Video Marketing Strategy (၁၀)ချက် : A Creative Digital Agency - Digital Dots
Video Content အတွက် Video Marketing Strategy (၁၀)ချက်
Marketing Strategy မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အလွဲလွဲအချော်ချော်တခုခုဖြစ်နေမှာပဲ။ Social Media က Content marketing တွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ မှန်ကန်တဲ့ Message ပေးနိုင်ဖို့ရယ် ၊ Target Customer ဆီ မိမိ Message ရောက်သွားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်…..
အဲ့လိုပါပဲ Video Content ကလည်း ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်၊ အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
Video Marketing Strategy အရေးကြီးတဲ့ (၁၀) ချက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်……
Client ရဲ့ထောက်ခံပေးထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ Product Reviews Video လုပ်သင့်ပါတယ်…..
2. Behind the scenes tour videos
ကိုယ့်ရဲ့ Client နဲ့နီးနီးကပ်နေပြီး ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုမိတ်ဆက်တာမျိုုး၊ Client ရဲ့ထောက်ခံမှုပေးတဲ့Video မျိုးလေးတွေတင်သင့်ပါတယ်။
3. How we make it videos
ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ကုန်ပစ္စည်း ပြုလုပ်ပုံ၊ အသုံးဝင်မှု၊ ပါဝင်မှုပစ္စည်းတွေကို Video Create လုပ်ပြီး တင်သင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်Company ရဲ့ Product, Services တွေ ပုံလုပ်ပြီး Photo Slide Show နဲ့ပြပြီး ကိုယ့် Product တွေကို ကြော်ငြာလို့ရပါတယ်။
ကိုယ့်ဗီဒီယိုမှာ စားသုံးသူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အကူညီပေးခြင်းဖြင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ကူညီပါ။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့် Company ပါ ကြော်ငြာပေးလို့ရပါတယ်။
6. Industry interview videos
သင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အမျိုးမျိုးသောကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့အင်တာဗျူးအားဖြင့် ကိုယ့်Client target ကိုထိရောက်စွာ ကြော်ငြာလို့ရ့ပါတယ်။
7. Helpful tips videos
Video မှာ Tips လေးတွေထုတ်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်လေးတွေတင်သင့်ပါတယ်၊ Customers တွေနဲ့Questions and answers ဖြေတာလေးတွေ Video လုပ်ပြီးတင်သင့်ပါတယ်။
8. Video articles
Blog တို့Articles တို့မှာ Posts တွေတင်ထားတာအများပြားရှိရင် Video အနေနဲ့ပြန်လည်ပြုလုပ်ပြီး Website တို့မှာပြန်လည်တင်သင့်ပါတယ်။
Vlog မှာ ဆောင်ပါးအတိုလေးတွေ ရေးနေမယ့်အစား Short Video လေးတွေလုပ်ပြီးတင်သင့်ပါတယ်။
Audience တွေကို စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့Turtorial တွေကို Video လေးတွေနဲ့Step by Step လေးတွေတင်ပြီး Audience တွေရဲ့အခက်ခဲတွေကို ကူညီပေးလို့ ရပါတယ်။